Igbo, Romans, Lesson 009 -- The Righteousness of God is Established and Realized in us Through Constant Faith (Romans 1:16-17) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 009 (The Righteousness of God)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- IGBO -- Indonesian -- Javanese -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba
Meputa: Nsọ, Na-ekpere Chineke, Na Emphasis Na “Iziri Niile Chineke Di Ka Metto Nke Epistle Ya (Ndi Rom1:1-17)
c) Emewo ka ezi omume Chineke guzosie ike nime anyi site n'okwukwe mgbe nile (Ndi Rom 1:16-17)
NDI ROM 1:17
17 N’ihi na nime ya ka ekpughere ezi omume Chineke site n’okwukwe rue okwukwe; dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, "Onye ezi omume g site n'okwukwe di ndu."
Onweghi nsogbu di n’ime akwukwo nso, nke bu eziomume nke Chineke. Ọ bụrụ na okpukpe anyị bụ nke enweghị isi, ụdị nsogbu a agaraghị apụta. Kaosinadị, mgbe anyị mụtara na ịdị nsọ nke Chineke chọrọ ka e gbuo onye mmehie ọ bụla, na ọ nweghị onye ezi omume n’ihu Chineke, anyị na-enwe mwute, n’ihi na mmadụ niile kwesịrị ọnwụ ozugbo. Ma Chineke ab gh only náán a ihe edoro ns] na onye ikpé ziriezi, na onwe ya, kama obu Nna nwere obi ebere, juputara na ,hụnanya, goodnessd goodnessmma, na ogologo ntachi obi. Ọ gaghi-eme ka onye-nmehie gwusia, kama ọ kari izọputa ya.
N'ihi ịdị nsọ ya, Chineke enweghị ike ịgbaghara onye ọ bụla na oge ọ bụla masịrị ya, n'agbanyeghị na ọ na-achọ ịgbaghara onye ọ bụla n'efu, n'ihi na ịdị ebube nke Chineke na-akọwa ịdị adị ya.
Dika osisa nye nsogbu a, o wetaara ikike inyi ozo n’ichu ahu, nke nwuru dika ndochi onye mmehie. Ebe obu na enweghi anumanu ma obu onyinye nke mmadu imezu ihe nke nmeko nke Chineke, oghoro inwe Okpara ya tupu oge nile, ka o we buru mmadu n’onye zuru oke, inwu n’ebe nke anyi, ikpuchi mmehie anyi, ma zie ezi anyi. anyị. N’agbanyeghi, okwu nke Akwukwo Nso nye ndi Rome abughi nke aka ayi, kama ezi omume nke Chineke n’onwe ya: Olee otu Onye Nsọ si di n’onye ezi omume n’agbanyeghi ime ka anyi buru ndi mmehie? Christ bụ naanị azịza nke ajụjụ a.
Ndị nke Iwu kwuru nkwulu megide obe, na-asị: "Ọ bụrụ na a ga-agụ onye ọ bụla site na okwukwe na Kraịst, yabụ ka anyị mee mmehie karịa, ọ bụrụhaala na amara nke Kpọgidere na-adọta anyị n'ikpe na-akpaghị aka." Pọl mara ha ikpe ma gbaa akaebe ha na okwukwe nke ndi Kraist abughi ihe ekwere na nkwenye, kama ha na Kraist ebikọ, ebe ike ya na aru oru n’adighi ike ayi, o n’edeputa nkpuru ya n’ime anyi. Iso Jizọs yiri yinye nke ụzọ njikọ ya bụ ụzọ nke okwukwe juputara n'ekele na ịhụnanya maka Kraist onye na-edobe anyị, doo anyị nsọ, ma zue anyị. Anyị abụghị ndị nzọpụta nke onwe anyị, kama anyị na-emeghe obi anyị na amara nke Chineke. Ndi ezi omume noo na okwukwe site na okwukwe. Ha sitere n'okwukwe rue okwukwe, ha adighi-ele onwe ha anya dika ndi ezi omume n’ime onwe ha. Kraist n’onye ezi omume n’onye ezi omume, Ọ n’edozi kwa ụbọchị, do kwa ha nsọ site n’ọrụ nile nke Mụọ ya. Dika odi, Chineke gara n’ihu ịbụ onye ezi omume, n’ihi na ọ na-agbaghara anyị ụbọchị niile, na edo anyị nsọ n’eji oge ọ bụla. Anyị bụ nke ya, anyị dịkwa nsọ nye ya.
Ajuju ajuju ozo banyere ndi gbara ogbugba ndu ochie ahu, nke mebere ezi omume Chineke n'okpuru akara ajuju. Ọ bụ ojuju nke ndị Juu. Ndi Ju kpogidere Okpara nke Chineke, ya bu na ha tufuru akuko banyere nzoputa ha. Ọzọkwa, ha na-emegide olu nke Mụọ Nsọ oge niile nke chọrọ ime ka ha chegharịa na okwukwe. N'ihi eziokwu a na-enweghị mgbagha, Pọl na ndịozi ndị ọzọ nọ na-eche, sị: “Olee otú Chineke ga-esi bụrụ onye ezi omume, ma ọ bụrụ na ọ họọrọ ezinụlọ Ebreham, wee soro ya na-agba ọgbụgba ndụ ebighị ebi? Na agbanyeghị, anyị hụrụ n’oge anyị na Chineke na-eme ka ha sie ike ma na-ajụ ha, n’ihi na ha emegheghị mmụọ nsọ ya. Chineke ọ̀ dara mgbe ahụ? nke mba nile nwere ịnụ ọkụ n'obi maka nsọ, ịdị nsọ na ezi omume nke Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Onye obula natara ezi okwukwe, we nyefee kwa uzo nke Mmuo Nso, a ga-eme ka uche ya di ndu, nwee ike ibi ndu nso n’iile ezi omume na agba ohu. O kpụrụ Iwu nke kristian anaghị akwụsị na agụmakwụkwọ nke mmadụ, ma ọ bụ ike nke mmadụ, kama na-erube isi na nrube isi nke ịhụnanya nke Chineke, na ike nke nzọpụta ya, nke nwere ndị niile kwere na Ọkpara ahụ. Akparamagwa nke ndi Kraist doro aha Nna ya ugwu. Ngosiputa ezi omume ya bu isiokwu nke Akwukwo Nso nye ndi Rom.
EKPERE: Chukwu, Chi Nso, anyi n’ekpe gi isi n’ihi na ikwenye anyi n’ezi okwukwe, wee guo anyi n’onye ezi n’ulo, I n’echebe anyi kwa ubochi ma n’edu anyi. Bụ Onye ezi omume, ị na-abụ onye ezighi ezi, n’agbanyeghi na anyị anaghị agụta ọtụtụ ngagharị nke ndị mmadụ n’akụkọ ụwa. Edo nso anyị kpam kpam, wepụkwa mmehie ndị nke ọzọ na agwa anyị ka anyị wee bụrụ otuto, na isi na-atọ ụtọ n'etiti mmadụ niile.
Gini ka eziomume nke Chineke na okwukwe o bula?
Page last modified on January 25, 2021, at 08:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)